Lammi Oromoo hundaaf 25/05/2011
Bubeen Bubisuu Kayyoo Ummataa Oromoo diina jala hin galchuu!!!
Oromoo Erga harka koloneefatati kufee kasse qabsoo bilisumma hanga hubannoo isaati wagoota 120 gutuu gegessa ture. Bara 1973 kasse kayyoo ummataa Oromoof ta’aa jeeduu bafatee qabsoo fula hundan gegessa ture. Qabsoon Oromoo fi dhaabbi ABO kan ijaramee namoota mursaa Angoo irra basuuf utuu hin tanee bilisummaa Oromootiif. Kayyon qulquluu qabateen ummata Oromoof bu’aa ABOn bussee salpha miti. Kanafu ummatii keenya ilee dhabba kana akka dhabba waloti ilalee dukka cichee jira. Kayyoon qabsoon deema tureef utuu feedhi Angoo ta’ee ABO mootummaa ce’uumsaa keessa hin ba’uu ture. Utuu Angoo ta’ee Wayyaanee Angoof nama kadhatuu dhissan miseensoon isaan OPDO keessaa dabalatee miseensoon dhaabilee adda adda Angoo ummata keenyaaf ittiin hojeechuu hin dandeenya jiruuf jireenyi keenyaf jeene motummaa Wayyanee dhugoomsuu hin qabnuu jeedhani biyya hin ba’aan ture.
Yaaki Annoolee fi cali caalankoo kasse hanga amaa Oromoo irrati gegefama jiruu yoo fula jijiratee malee guyya tokko ilee Oromoon waregama lubu hin basin hin olee hin beeku, haala kana keessa motumma kana waliin hojeechuun, beekamtii keenuufn murtii haqa fi murtii samuu gaafanan Oromoon heedun gara qabsooti deema jiru. Oromoo sanyiin adda base faxaa kan jiru TPLF:-
1. Oromoo bakka lafa dhaloota isaa irra gutuman gututi buqisee lafa Oromoo diina cimmati keene Oromooti diina birra ijara jira.
2. Baratoon Oromoo irrati wayyanen akka itti nama ajeeftuu irrati shakala jirtii;
3. Baqaoota Oromoo biyya ala hunda keessati darara, ajeessa, mana itti guba, qabdee biyyati deebsuun ajeessa jirti;
4. Qotatee bulan Oromoo lafa isaa irra bu’uu irra darbee yoo Mootumma TPLF degeruu didee sanyi filatama fi xa’oo dorkamee akka lamii lamafatii gidee jeedhe jiracha jira;
5. Daldatoon Oromoo daldala isaan irra ari’amani lamii Tigrayiin dhunfatamee jira;
6. Beekan Oromoo soban yakkamee dorsifamee biyya ari’atama ykn ni heedhama jira;
7. Oromoo fi Oromoo gosaan gargari qooduun wal ficisisuu, Oromoo lafa isaa nannoo birrati kutuun Oromoo hoola isaa akka wal fixuu goochuun yaaka guyya guyyan Oromoo irrat dalagama jiru dha.
8. Qotatee bulaa Oromooti xa’oo hin tanee rabsuun lafi Oromoo Asidi biyoo godhatee tajajila keenuu dhisuun qotatee bulan Oromoo balessaa jira, lageeen fi lafi qoona heedun amoo xurii warsha keessa dangala’uun manica’aa jira;
9. Oromoon tajajila dhali nama argachuu maluu tajajila fayya, tajajira barumsaa, tajajila ibsaa, tajajira bishan dhugatii, tajajila qunammti walumaa galatii tajajila hawwasumma dorkamee jira.
Oromoo abbaa biyyuma Oromoof Bilisummaa Oromoof qabsoo yerro dheeraf deemsisa jira. Qabsoota heeduu itti waregamani, maatiin heedun jijiruuf jirenya isaa itti dhabee jira. Cicicha qabsoo kanaaf qabuun biyya isaa keessati akka lamii lamafaatii ilalamee gidiraa kana hin jeedhamneetuu irra ga’aa jira. Baratoon Oromoo sanyiin qoodaman univesity hunda keessati dararama gudda utuu irra ga’uu bilisummaa Oromoof jeedhan diina waliin kookee wal qabani jiru.
Oromoo hanga amatii qabsoo kan gegesa jiru, diini koo na gargara jeedhee miti. Biyya adunya keessati ummani gabroomee garboonfata isaan hariroo umatee bilisoomee hin jiru. Russian milioona heedun ummata murassa Tatatra Mangol (Mangolia) jala kan bilisoomee, ummani India garbumma wagga 500 booda UK irraa kan bilisomee araran ykn wal galteen garboonfata waliin goodhen miti. Seena adunya kana hunda dhiifnee bubee bubifameen kayoo wagga 120 ittin qabsoofne dhifnee diina jala shubsuu maltuu fidee? Gaafi ummataa Oromoo cicichaa qabsa’oota murni nama 10ti lakkawamuu jijiruu ni danda’aa?. Madi Kayyoo ganuu kun esaa madee?
Nu Miseensoon Gummi Paarlamaa Oromoo biyya keessati Melesa durati dhaabanee soda tokko malee lamii keenyaf falmachaa ture, biya ala dhufnee garuu nami ala jiru lamii hamilee hin qabne, dhabilee keessi isaani suma’ee yamuu ariginuu Oromumaa nu jibisisee ture keesatuu:
Obbo Ibsaa Gutama bu’uuressan ABO Oromuumaa fi kayyoo ummataa Oromoof falmadha jeedhan dhamsaa abbummaa dargageessa Oromoo hundaaf kan dhaamatan yakka hojeetama jiruu kun onnee isaani madeesee jeenan.
Murni qabsoo bilisumma tobadhee jeechaa jiruu kun yerro mora qabsoo keessa yamuu ture iciti qabsa’oota biyya keessa jirani beekuu hunda diinf keenuu isaan hara miseensoon WFDO fi OBK (OPC) yaaka tokko malee guraman hidhama jiruu, Baratoon Oromoo lamii Ethiopia hunda irra ala ta’aan qabaman hidhama kan jiran yaaka ergamtoon diina qabsoo bilisummaa tobantan biyyati galan gartuu Licho Bukura faa fi harcatuu biyya alati haftee kun iciti gadi basaa jirtuuni ta’uu isaa ibsuu barbana. Biyyati keessati mormitooni heedutuu qabsoo gegessa jira, miseensoon Ginbot 7 ykn MADRAK biyya keessa ni jiru garuu tokko isaan hanga amati hin yaakamnee, hin hidhamnee, baratan isaan naggan barachaa jira. Oromoon garuu bakka hundati gaga’ama jira, madii gaga’ama Oromoo kun malii??. Deebiin isaa ifadha.
Waraan Oromoo biyya keessa galuu utuu rassasa tokko hin dhukassin qabamuun, kun utuu hin hanxiqatiin qabsa’oon Oromoo qabsoof mana ba’aan rassasa tokko harkan hin qabnee, aduu, qoonqoo fi beelan Hongee Asab keessa du’aa fi jirenya giduu jiratuu Ati Shawa, ati Harargee, ati Walega ati Borana, ati Shanee jala deemtee jeechuun rassasaan fixuun enyuun gamachisuuf?; qabsa’oota badii tokko ilee gegsisuu hin dandeenyee kan diiga isaan dhangalasuun siirdha? Maqa gosan gurma’ani Oromoo haqa isaaf falmachuu mana ba’ee irrati yerro yerron yaaka yamuu dalagan kaleessa Hayuu qabsoo Oromoo wajjira keessa qaban yamuu gadii darbatan dhifami goodhameef amoo nama 17 bakka tokkoti yamuu ajeessan dhifami godhamaf jira. Murni kun maqa gosaa isaan itti yakka kan dalagan ilee jarsoolee gosa kan caliisun isaan yaaka kan akka ittifufan hayyama lachuuf nutii fakkata. Waan feedhan goochaa warii jiran kun amoo “qabsoon bilisummaa dogogora, hidhamtoota seena ta’uu hin qabnuu” nun jeechaa jiru. Garuu ummani Oromoo hundi ta’ee gosi Oromoo kami iyuu qabsoon Ummatii Oromoo hanga amaa gegefama jiru dogogora hin jeedhu.
Warii Israel murni murassi biyaa baqa irra deebeyan yerro mursa keessati lafa murasa qabatan lafa Palastiinota hunda kan dhunfatan, Araboota hunda injjifatan adunya irrati kan sodatama diina isaani waliin wal galani utuu hin tanee cimmana fi muranon lola hadha’aa adeemsisanti. Oromoon miliyoon 50 Tigre Milliona 5 jeecha sababa 100 dhiyeesun diina birroti hirkachuun bu’aa isaa irra bala isaatuu caalaa. Rakko himachuu qofaa malee qabsoon rakko keessa ba’uuf murannoo dhabuun diina keenya wagga dheerati heerumun isaan salphina.
Miseensoon GPO erga biyya banee kaafnee qabsoo ummataa Oromo biyya keessaf degerssa keenuu caalaa Dhaabilee Oromoo diina dhisaan wal irrati booba’aan ararsuu fi yadda arara dhiyeesun, olola qabaneesuuf dursa keena ture, garuu yaaliin keenya hundi dokatee unini iyuu gara qama diigumasaati nu maxruuf yaali guddatuu turan, keesumati Habashoon Oromoti maxanan diina Ethiopiati nu jeedhan nu yaakun Oganoota Oromoo garaf bulan tokko tokko qabatani uni irrati boba’uun samuu qulquluuf fi harka qulquluun caraqii uni goonuu jijirani maqa nu xureessa turan. Gantoon kara irra qabsooti makaman qabsoo kara walakati gatan deeman qabsa’oon Burgarii fi isikearm kun kiyoo isaan nu qoophessan keessa seenuuf diina Habasha kaleessa Oromoo harka fi harma muree jala seenan miseensoota keenya biyya keessa fi biyya ala qabso’oo irra ala goochuu hojii goodhatan. Dhummatii Baaqilaa dhufuu hirsaa akkuma jeedhamee gantoota waliin hiriruu dhisuun keenya nu cimsee malee nu hin baleesine, qabsa’oota Oromoo harka isaanti kufan yerro tokkon diigan kan lubu isaan baleessan, wari utuu rasasa tokko diinati hin dhukassin lubu ilmaan Oromoo heeduu baleese kun enyuun ilee maqa xuressu hin danda’uu.
Kayyoo keenya gaadii dhifnee kiiyoo hormi nu qoopheesa jiru keessa galuun dogogora gudaa dha. Haqa saba keenyaf falmachuu dhifnee diina jala deemnee lamii keenya ija lafa ilachisuun ummataa gudaa kana salphisuu irra of qusachuu qabna.
Oromoon Abba Gaanfa Afrika ta’ee utuu jiru, Abbuma kana diina keenee diina irra demokirasii kadhachuu yaalun kayyoo ummataa keenya ganuuti deemama jira.
GPOf Yerro Oromoon oganaa cimma dhabee gara itti goruu walalee kara laman giduu dhabatuu caliisan ilaluun diina tumsuu waliin wal qixeedha. Ummani Oromoo gadii deebiyee yerro lagan wal qoodee amantan wal qooqoodee diina jala hiriruu kara qabsoo haqati deebsuu dirqama keenya. TPLF Buqisuun hoji fi dirqama keenya isaa durati, Melese Zenawi Ditator Afrika keessa ummata irra bu’qa’uun akka qabuu wal nama hin makisisu. Waregama kami iyuu bafnee diina hama kan achii kasuun murtee nama dhuggaf yaaduu hundati. Akka Oromooti amoo Hawwassa abdi kutatee, dhabbilee wal diigan ta’aan wal shakuu hoji goodhatan fi wari qabsoon Oromoo qancaruu isaan mufatan hundi halaa dure tokko malee warabessa TPLF nu nyacha jiru of irra buqisuuf, warabessa wagga dhibba nu qorqee amasi lamafa nu nuyachuuf nuti gama jiru kana utuu gola of hin argisisin hojeechuun dirqama. Warii qabsoo furgasuu dadhabee ta’ee wal shakee nama shakee, diina dhisee lamii isaa irrati qoofa olola ofuu siiresuu ykn birra darban waan Oromoof maluu hojeechudha.
Tarsimoo diin itti nu diiguuf bafatee wagoota darban kasse nu irrati gegessa jiru qabataman beeknu keessa ini guddan Oromoo Oromuummaa isaa dhisee gara amantati akka dacha’uu goochuu ture, wari tarsimoo kana basan gaafa Dargiin kufee daabalee fi Ooganno gurgudan dargii dabalatee mazijida fi walda kirsityanati galuu isaa caqasuun Tamirat Linnee gaafa ari’amuu waqaa fudhachuu isaa caqasuun dhabbalee Oromoo fi hawwasa Oromoo wal diige jiru kan uttun deebiyee hin ittittin walda musilma fi kirsiyana Ethiopia jalatii dadafiin akka amataman goodha kan jeedhuu ture. Kun hoji irra ola akka jiru Oromoon fi dhaableen Oromoo ni beekuu, hidhannoon siyyassa fi sabonuman keenya wagga tokko keessati baqee dhumuun kun hidhannoon siyyassa fi hubannon Oromummaa nu qabnuu lafaa ta’uu mulisaa. Ummani (Dargagoon) Oromoo ole utuu hin buliin irrati mariiatee murteefachuu qaba.
Rakkon kana oliti gababati lafa dhiyoo keessa nu mudatee fi qabsoo saba keenya gara hin taneeti geessa jiru kan dafnee siiresuu qaban ture, garuu dhaabilee Oromoo yoo tokko tanee kabaja, dhageeti fi humna argana jeenee gafii dhabbilee Oromoof dhiyyassa ture keessa kayoo bilisumaaf wal tanee hojeechuuf, Oromoo fi Oromiya bilisoomsuu irrati waliin hojeechuuf kan feedhi fi yaada ifaa fi qulqulu kan nu keenan dhabilee murassa.
Kanaaf Oromoo ilalcha ganda fi leesumaa amanta dhisee qabsoo enyuuma Oromoo, Oromummaa fi Bilisummaati cicichee wal gurmeesinee qabsoo haqa ummataa Oromoo bakkan ga’uuf muranoo fi saboonumman hojeechuuf murtee bilisumma ykn dhu’aa jeene irrati wal galuun qabsoon TPLF fonqolchinee Bilisummaa Oromoo dhugomsuu qofa.
1. Fincilaa Oromoon biyya keessa deemsisaa jiru waan hundan degeruu, irrati hirmachuu qabsa’uu, oduu gadda utuu hin tanee diina gadisifnee umataa keenya bonsuu qabna;
2. Miseensoon keenya fi ummani Keenya Mootummaa TPLF beekamti dhorkachuu qaba, marii kami iyuu siirnicha wal goodhuu dhabuu qaba;
3. Habasha Mirga hiree murteefana Oromoo hin kabajeenye fi siirna Habashan yaaka Oromoo irrati dalgamee fudhatee qama dhifama hin gaafanee waliin hariroon kami iyuu goochuun feedhi ummataa Oromoo ala waan ta’ee dura dhabatamuu qaba;
4. Oromoon Oromoo irra malee horma irra bituu fi gurguruu dhabuu qaba,
5. Diinoon keenya waan isaan Oromoo irra saman, dhaabilee daldala isaan fi qamoota isaan waliin samicha keessa jiru hunda samuuti galmeefatee qabachuun soochii isaan hordofuu qaba;
6. Ergamtoon dhigga Oromoo hanga amaa Habashan dhangla’ee utuu beekan diina Oromoof gorsituu ta’aan icitii Oromoo dabarsa jiran bakka hundati maqan isaan galmayee lamiin keenya akka beekan gochuu dha;
7. Bilisummaa fi Oromumma Oromoo lubu itti waregama jiru kana irra tarkanfatani maqa amantan warii Habsha jala jilbeenfatan atatamn akka dhaaban ummani Oromoo diibaa akka irrati goodhu, nu amanta irra jiba hin qabnuu, garuu wara afaan sexanan hin kadhatiin qubee sexanani hin bareesini jeedhi waqa nuti kadhatuu waliin dhabachuu diinuma gudadha;
8. Isilamuman ykn Kirtstanuman lamii of nama jibisisee diina nama jalachisuu amanta ergmtoon siyyassa diina keenya fi kiyoo itti nu takaluuf qoophee malee waqayoo Oromoo afaan keenefiin yoo kadhatamee waan hin dhageenyeef hin jiru, Obbolummaa lammi kee dhissi amantani obboleessa siif tana warii jeedhu isinisi waqasi soba akka jiran Oromoon beekuu qabda, aboon keenya barumssa dhabba muka habashan softee itti qabduu dhungacha ba’aan gowonsamuu isaan arginee, warii hara 21faa keessa USA fi Europa ta’aan wara goyyoma jiran dafani damaquu qabuu jeena,
9. Oromoon biyya ala jiruu oduu diina hunda jala adeemuu dhisee Ambasadara Oromoo ta’uun Oromummaa ijaruu qaba, qabsoo isaa waan hundan degeruu qaba, biyya jiruti Oromumma gadii dhabuu qaba;
10. Qabsa’oota biyya keessa gurmeesuu, leenjisuu, ogummaa siyassa fi meesha hidhachisuu, meeshaa diina dhunfachuu barsisuu qabna;
11. Media fi qunamtii kara hunda biyya keessati cimsuu hoji keenya atatamati;
12. Qabsoon dhugga biyya keessa jira waan ta’eef dhaabilee biyya keessa jira utuu diinaf hin saxiliin jabesuun dirqama ta’aa.
Fincili ummataa fi qabsoon kara hundan kan cinqama jiru TPLF Tigrayti galee Bilisumaa Tigray lubsachuun isaa hin oluu, Oromiyyan keenya of bilisomsuu qabdi malee seena soba 3000 sun haramsuuf wada galuu hin qabduu. Diina waliin marii, wal galtee fi wadaa wal galuuf shubisuu dura warii bilisummaa Oromoo barbanuu wal dhaga’uu qabna. Soban wal shakuu fi ergama HABASHA fudhanee qabsa’oota qabsoof ban irrati boba’uu dura wal mariachuu fi dhageefachuuf rakko bor nu mudatuu amuma xinxala adeemun dirqama.
Oromoo laga, amantan ilalcha siyyassan utuu wal hin qoodiin diina hama TPLF kan buqisuuf qabsoo gegesa jiru bakkan ga’uu qaba. Akka gafa ce’umsa sun ummani Oromoo utuu waraana TPLF gadii nuti hin dabarsina jeedhe bargamoo karati jigisee of irra eguu, waraani TPLF nagga biyyati egaa hadarbu jeedhame sun bori amoo biyyi keenya tokko waan ta’eef waluman Naannoo hunda to’aan qami jeedhe yaaduu yoo jiratee kan wal dhabuu dandeenyuu asi irrati qoofa ta’uu hundi beekuu qaba. Waan irrati wal galu dadhaba jiru ilee kanuma qofa ta’uu hundi beekuu qaba.
Dogogra Irra dhubadha jeechuun yaaka miti ; qeeqa jibinsa Daqqabaa Hawaasf keenameef deebi
Gummin Paarlamaa maqa Oromotiin dogogra hojeetamu enyuuf ilee dhifama hin goodhuu,
OPDO maliif qeeqame kan jeedhu argine jira qeeqamuu qaba maqa Oromoon waan hin tanee yamuu hojeetuu” ABO caalaa TPLF ummataa Oromooti anna “ Abba Dula Gamada jeedha, utuu lamii Oromoo irrti yaaka isaan hanga amatii hojeeta jiran utuu hin dabalatii jara kan qeequun Oromo midha?;
Hayuu Oromoo heedu gadii darbataman siiri miti jeechuu, iti dabaluun lubu 17 baleesuun siiri miti kun itti fufu hin qabuu jarsoolee gosaa ilee kana dhabsisuu qabuu diiga wal dhangalasuun siiri miti jeechuun mal badee akka ittifufu yoo barbadan dura dhabachuun hin oluu; Qeeqii keenya yerro Sun akkeeke Jijjiirmi Ergama diina ta'uun ifaa ta'ee.
“Hidhamtoota seena hin tanuu” dogogra keenya irra baranee Ethiopia demokrateesuuf ni hojeena jeechuun qabsoon wagga 40 deema ture bishan itti naquun siirdha? . Akkuma jari ejjenoo isaan qabatan nu wal dubatan uni ejjennoo keenya qabanee jara waliin dubachuu dhifnee maliif waan darba dubana? Kun siirefamuu hin qabuu?
Yoo demekrasii nu fiiduu ta’ee biyya gargari kukutuu hin feenu qabsoo bilisumaa ni dhifna jeechuun siirdha? . Qabsoo lubun Oromoo heeduu itti badee nami tokko lafa ka’ee kayyoo cabsuun siirdha?
Gaafa WFDO fi OBK hayyama miseensoota malee MADRAK keessa galan dursiine morminee miseensoon keenya hundu ejjennoo keenya ni degeran, tokkumman nu barbanuu kan WFDO fi OBK qoofa jeechuun, gaafasi maliif jara kan mormitan nami nun jeedhe hin ture;
GPO gaafa “keeyaati 39 gaafi Oromoo miti feedhi TPLFti” yamuu jeedhamee VOAti dubatamee hanga dhummati mormine akka siiratuu ta’ee , nami nama suun maaf qeeqtan jeedhe hin jiru;
c) Because the army and state institutions will remain intact, secessionists will not be able to break away any part of the country and have to wait for the due process. Gorsi kun enyuuf fayada ? lami of gorfachuu moo diina gorsuu wayya jeene mormanee jira, Mormiin keenya kun yoo Oromo ni midha ta’ee of siiresna ture garuu nu siiressuf utuu hin tanee jibinsa hama fi summi gara jiruu bafachuuf;
Baratoon Oromoo Eritreati rakkatan jeedhaman ama Holand jiran akka isaa Asmarati naggan deeman kan goodhe Daqqabaa Hawaas miti ijooleen kun ni beeku. Akka isaan naggan bakka barbadan deeman gumachi goodhamee ilee jira, jari kun hin haalan.
Nami samuu madalawa qabuu yamuu bareefama tokko qeequu ijoo dubi sana erga ka’ee booda qabxiin kun akkasiti siirefamuu qaba, ykn amoo qabxiin kun dogogra waan jeedhe waan ta’ee malu kan ykn utuu akkasi ta’ee jeedhama malee ati akkasi ati akkasiin jibinsa of mulisuuf malee dhuguma dogogori jiratee miti. Jibinsa walaluma irra ykn ammo Oromummaa of ilee walaluu irra kan ka’ee waan ta’ee qeeqaa qabxii tokko ilee of keessa hin qabnee, bareefama kan waliin wal qabatuu hin jiru, Komputera jala ta’aan HABASHA farsuu fi lammi of irrati amoo duluu wari addaa goodhatan walalota hinafaa gadhee of keessati dhalchani wallin rakkata jiranidha.
Waan nu sirsuu barbadan yoo jirate website ejjeenno irrati ibsameeti yoo ergitan deebi ga’aa argatuu jeene amana, kana ala nami ta’ee email namaf deebi keena oluu akka hin jiree kabajamoo obboleessi kenya obbo Daqqabaa Hawaas nu beeki